Uyenza njani into yokuba uhlaziye umoya ococekileyo ukuze uqhumise indlu | IBezzia
Uyenza njani into yokuba uhlaziye umoya ococekileyo ukuze uqhumise indlu
UToñy Torres | 09/10/2021 16:00 | Yenze ngokwakho, Ikhaya
Ukwenza umoya oqinileyo ohlaziyayo ukuze uqhumise indlu ngokukhawuleza kwaye kulula kunokuba kubonakala ngathi. Lo nto ungalivumba ikhaya lakho kunye nevumba lakho olithandayo, Ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa iimveliso zeekhemikhali kwaye ungayihloniphi indalo. Ukuba nephunga elimnandi ekhaya kubalulekile ukuze ukwazi ukonwabela imo yempilo-ntle yekhaya elicocekileyo nelicocekileyo.
Ukufezekisa oku kukho izinto ezininzi ezinamaqhinga okuzenzela, ezinje ngokuba neentyatyambo ezintsha, izihlaziya zomoya kwigumbi ngalinye, iingxowa zelaphu ezineentyatyambo ezomileyo kwiikhabhathi, phakathi kwezinye iindlela ezininzi. Njengale ngcamango yokwenza umoya ococekileyo onokuwusebenzisa zombini ukutshisa indlu, njenge iidrowa okanye iikhabhathi zangaphakathi. Kuba akukho nto ingathandekiyo ngaphandle kwengubo exabisekileyo kodwa inevumba elibi.
1 Umoya ohlaziyekileyo womoya, wenziwa njani?
1.1 Ngomthwebeba wemifuno
1.2 Uyenza njani into yokuhlaziya umoya oqinileyo ngejeli
Umoya ohlaziyekileyo womoya, wenziwa njani?
Uhlaziyo lomoya awuyonto ngaphandle kohlobo lwebar yesepha yakudala, kuphela endaweni yokuba usetyenziselwa ukuhlamba iimpahla, isetyenziselwa aromatize ikhaya okanye iikhabhathi. Ukwenza ezi sepha zinukayo okanye umoya oqinileyo wokuhlaziya, uzakufuna i-wax yemifuno ukwenza izinto eziqinileyo. Nangona kukho enye indlela elula, ekhawulezayo kwaye engabizi kakhulu, i-gelatin. Nantsi indlela yokwenza umoya oqinileyo uhlaziye Zombini ezi ndlela, ukuze uzame ukwenza eyakho indalo yokusebenzisa isiqholo ekhayeni lakho.
Ukwenza i-air freshener eqinileyo eyenziweyo uyakufuna ukusebenzisa i-soy wax, oko kukuthi, iyimveliso ukongeza ekwenzeni ngesandla, yi-vegan. Ngokuphathelele kwisithako esisetyenzisiweyo ukufezekisa isiqholo, unokukhetha ioyile eyimfuneko apho isixa esisetyenzisiweyo siya kuba yi-5% yemali ngokubhekisele kwi-wax. Ukuba ufuna ukusebenzisa ioyile yezityalo, ipesenti iya kuba yi-10% ngokubhekisele kwinani le-wax yemifuno esetyenzisiweyo. Ezi zizinto oza kuzifuna yenza i-wax-based air freshener eqinile eyenziwe ngemifuno.
I-100 gr ye isoya wax
ioli ebalulekileyo okanye i-botanist oyikhethile
Inkqubo ilula kakhulu kwaye ayizukuthatha ngaphezulu kwemizuzu engama-30. Isitshixo kukunyibilikisa i-wax ye-soy, inkqubo ekufuneka yenziwe kubushushu obuphantsi. Xa i-wax inyibilika ngokupheleleyo, sidibanisa inani elifunekayo levumba elikhethiweyo. Khumbula, ukuba usebenzisa i-oyile eyimfuneko kufuneka udibanise i-5% kwaye ukuba yioyile yezityalo isixa esi siya kuba yi-10% xa kuthelekiswa ne-100gr yesoya wax.
Hlanganisa ngepuni yeplanga kwaye udibanise izithako kakuhle. Emva koko, uthele lo mxube kumngundo we-silicone. Kubalulekile ukuba zenziwe ngale nto ukuze iipilisi zomoya zihlaziyeke lula ekubumbeni. Ukuba ufuna ukuhombisa ukomelela komoya okuqinileyo, kuya kufuneka wongeze amagqabi ambalwa embiza, amagqabi omisiweyo, intonga yesinamoni okanye amaxolo e-citrus. Vumela umxube upholile kwaye uqinise ngokupheleleyo Ngaphambi kokungatyhileki kunye ne-voila, sele unezinto ezihlaziyiweyo zokwenza umoya ococekileyo oza kwenza ngazo indlu yakho.
Uyenza njani into yokuhlaziya umoya oqinileyo ngejeli
Olu khetho lulula ngokulula njengangaphambili kwaye amanyathelo ayafana. Umahluko kukuba isithako esisetyenziselwa ukufumana into eqinileyo yi-gelatin. Inkqubo yile ilandelayo, Kuqala kufuneka sibilise indebe yamanzi, kunye nemvulophu yegelatin engathathi hlangothi kunye neetispuni ezine zetyuwa. Xa umxube ubila, susa emlilweni kwaye ungeze ikomityi yamanzi abandayo.
Ngeli xesha siza kufaka isiqhumiso esikhethiweyo, siya kufuna malunga ne-10 okanye i-15 yehla yeoli efunekayo. Kwaye ukuze umoya oqinileyo wokuhlaziya unombala omnandi, siya kongeza amathontsi ambalwa wombala wokutya. Thela lo mxube kwizikhongozeli zeglasi, ezinje ngejagi, iingqayi ezincinci zemasoni, okanye nayiphi na ingqayi yeglasi onayo ekhaya. Nje ukuba umxube uphole, i-gelatin iya komelela Kwaye uya kuba nomoya ohlaziyekileyo wasekhaya oza kubeka kuwo amagumbi okuhlambela okanye kwiikona ezincinci zekhaya lakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ikhaya » Uyenza njani into yokuba uhlaziye umoya ococekileyo ukuze uqhumise indlu
Imithambo yomlenze eyenzelwe ekhaya
Izibonelelo ezilungileyo zokutya iibhanana